Dowladda oo sheegtay in howlgal lagu diley Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan Guutada kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab gaar ahaan Guutada 16aad ayaa hawgal Qorsheeysan waxaa ay ka fuliyeen duleedka deegaanka Bariire Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa...
Mjournal :-Guddiga Farsamada maamul u dhisidda Galmudug ayaa sheegay inay saacadaha soo aadan ku dhawaaqidoonaan guud ahaan liiska barlamaanka cusub ee Galmudug. Guddiga ayaa hadalkaan ku sheegay qoraal kooban oo ay ku kusoo daabaceen bogga ay ku leeyihiin internetka. Guddiga...
General Qassem Soleimani oo Weerar Lagu Dilay
Mjournal :-Madaxii Ciidamada xulka ah ee Quds Force ee Iran, General Qassem Soleimani, ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen Saraakiisha Ciraaq. Abu...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ka laabtay Wakaalashadii uu wakiishay Wasaarada Arimaha Gudaha Soomaaliya kadib markii uu arkay faragalinta ay Dowladu ku heyso Gudiga Doorashada Galmudug isagoona soo dhameeyay Hishiiski Dowlada iyo Ahlusna ee 12/12/2019